“UNkulunkulu namadlozi akithi anesizathu sokungiphilisa” | Scrolla Izindaba
“UNkulunkulu namadlozi akithi anesizathu sokungiphilisa”
Ngenkathi uSimon Mhlang ebuyela ekhaya ephuma empini kowezi-1945 ubengenawo umndeni kanye nendawo yokuhlala.
Kunokuthi acwile enhluphekwe kwamele ukuthi enze icebo.
“Kwakumele ngilwe ukuze ngizozenzela impilo encono.”
Into eyodwa abuye nayo emasosheni ukuthi ubephila kahle emzimbeni nasempilweni.
“Ngangilokhu ngithanda ezemdlalo futhi ngangihlezi ngifuna ukuziphilisa ngezemidlalo kanye nangokuzivocavoca.”
Ubeyisikhulu seqembu lebhola lezinyawo ekilabhini ye-Motherwell e-Roodepoort kanti ubekhona ukukhokha irenti ngaleyo mali.
•Iqembu lebhola lezinyawo lapho ayeqeqesha izingane ezincane zabafana ukuze zizodlala umdlalo omuhle.
•Waqala ikhwaya yomculo, i-drum majorette kanye nebhendi yebhesi.
Indlu kaMhlanga ihlotshiswe ngegolide eliningi, isiliva kanye nezindebe zethusi, izitifiketi kanye nezindondo aziwine eminyakeni eyedlule emidlalweni eyahlukene kanye nasemisebenzini yokudansa.
“Ngaqala imidlalo eyahlukene kanye nemisebenzi yokudansa ukuze ngikhuthaze izingane.”
Uhambele zonke izinxenye zezwe ukujabulisa abantu.
“Angifundisanga izingane ezincane ngezemidlalo kuphela kodwa nokuziphatha kanye nezifundiso zempilo.
“Impilo yaqala lapho ukuba yinhle futhi. Izinto eziningi bezenza ngithande ukuphila kanye nesizathu sokuthi kungani ngigcinwe ngiphila nguNkulunkulu wami kanye namadlozi ami.”